Qoraaga Caalamiga ah ee Nuuradiin Faarax oo Khudbad u Jeediyay Ardayda Jaamacadda | Daraawiish.com
Qoraaga Caalamiga ah ee Soomaaliyeed Nuuradiin Faarax oo ay Maamulka Sare ee Jaamacadda Abaarso Tech ku casuumeen Xarunta Jaamacadda ayaa khudbad wejiyo badan lahayd u jeediyay Ardayda wax ka barata jaamacadaasi.
Kulankan oo ay ka soo qaybgaleen ardayda wax ka barata ardayda jaamacadaasi iyo xubno kale oo ka socday qaybaha kala duwan ee bulshadda ayaa ahayd mid aad u xiise badan. .Ugu horrayn waxa halkaasi hadal ka jeediyay Guddoomiyaha Jaamacadda Abaarso Tech Dr. Axmed Xuseen Ciise oo qoraagga ku soo dhaweeyay jaamacadda. Waxaanu kula dardaarmay ardaydu inay ka faa’idaystaan. Dr. Axmed Xuseen Ciise Guddoomiyaha Jaamacadda ayaa xusay muhiimadda gaarka ah ee ay leedahay in Ardaydu fursad u helaan aqoonyahan soomaaliyeed oo buugaagtiisu heer caalami yihiin su’aalana ka waydiiyaan waayihii uu soo maray.
Qoraagan Caalamiga ah ayaa ardayda uga sheekeeyay heerarkii kala duwanaa ee uu soo maray Qoraalkiisu, isagoo xusay inay ahayd mawhibo gaar ah oo la soo jaan-qaaday noloshiisii caruurnimo dedaal badan oo uu sammeeyay ku noqday in buugaagtiisa lagu tarjumo in ka badan 30 af.
Nuuradiin Faarax ayaa hoga-tusaaleeyay kuna dhiiri-geliyay Ardayda iyo guud ahaanba Mujtamaca Soomaaliyeed in ay sabir u yeesheen wax akhriska oo uu sheegay in haddii, isagoo tilmaamay qofku sabir u yeesho wax akhriska heli karo macluumaad faro badan oo ka maqnaa fursadna u heli karo wax qorista.
Waxa kale oo uu sheegay Qoraagu in ay aad u hoosayso tirada dadka ku hadla af-soomaliga ee wax akhriyaa taasina keentay in qoraayo fara badani ay ka caajisaan buugaag ay soo saari lahaayeen, sidoo kalana hortaagan tahay inay soo baxaan dad wax qoraa. Waxaanu ku dheeraaday sida loogu baahan yahay in dhaqanka akhriska bulshadda lagu wacyigaliyo.
Qaabka loo jeedinayay ayaa ahayd mid laba geesood ah, taas oo ardaydu ay su’aalo badan weydiinayeen qorraaga kuwaas oo iskugu jiray kuwo la xidhiidha buugaagtiisa uu qoray, taariikhdiisa iyo talo-soo-jeedin uu u gudbinayay guud ahaan mujtamaca oo la xidhiidha dhinaca saqaafadda qoraalka iyo akhriskaba.
Ugu danbayntii Jaamac Muuse Jaamac oo ka mid ah martisharafta xafladdan ayaa ardayda u soo jeediyay hadalo kooban, taas oo kula dardaarmay inay akhriska badiyaan si ay u noqdaan kuwo filkood caalamka la tartami kara. Waxaana soo gunnaanaday kulankaasi Guddoomiyaha Jaamacadda Abaarso Tech, Dr. Axmed Xuseen Ciise oo sheegay in Jaamacadda iyo qoraagu ay isla garteen sidii ay u turjumi lahaayeen afka Soomaaliga mid ka mid ah buugaagtiisa.
Category Maqaallo, Tijaabo
← Halkan ka eego/fiirso Wakhtiyada Salaadakana xulo Magaalada aad Joogto
. World News Today (Google) →